🥇 ▷ Soo hel astaamo dheeri ah oo ah muraayadaha Apple Glasses-ka & # 039; digirta & # 039; goobta ✅
Soo hel astaamo dheeri ah oo ah muraayadaha Apple Glasses-ka & # 039; digirta & # 039; goobta
The digtoon Apple oo u oggolaanaya raadinta ashyaa’da lumay waxay noqon kartaa run xaqiiqda ka dhow sidii aan moodayay. Sababtoo ah markale laga bilaabo 9to5Mac waxay bixiyaan macluumaad shaandhaysay ilaha ay kaheleen tan iyo aalad kale oo ku dhawaad ​​astaamihii shirkadda California. Muraayadaha Apple.
A ‘digtoon’ leh bluetooth LE, NFC iyo af-hayeen
Guilherme Rambo waa tifaftiraha muujiyey faahfaahinta ku saabsan labada aaladda mar labaad. On tracker, qalab yar awood u leh inay muujiso meesha ay ku taal, ayaa sheegaya in ay ka buuxaan tikniyoolajiyad isla markaana shaqooyinkeedu yihiin sidan soo socota:
Calaamad cad oo leh qaab wareegsan iyo astaan ​​Apple.
Bluetooth Low Energy iyo NFC xagga isgaarsiinta.
Hadal yar oo ku caawiya goobtiisa.
Waxay la shaqeyn doontaa nooca Iftiimin macruufka oo kuxiran lahaa isticmaaleha ‘koontada’ iCloud agtiisa agtiisa. Sida ku AirPods, HomePod ama Apple Card. NFC waxay u oggolaanaysaa dadka kale inay iskaan iskaan oo ay arkaan cidda ay tahay. Waxaa intaas sii dheer, Apple waxaan adeegsan lahaa isla nidaamka si aan u helo Mac lumay lagu dhawaaqay WWDC. Nidaamkani uma baahna isku xirnaan internet, maadaama uu ku tiirsanaan lahaa aaladda tufaaxa ee ku hareereysan. Waxaas oo dhan si nabadgelyo ah oo qarsoodi ah.
Sidan, marka sumad lumay, waad la xidhiidhi kartaa xaaladaada adoo ku tiirsanaya qalabka kale ee isticmaala. Xitaa waxay soo bandhigi karaan farriinta aaladahaan si ay uga caawiyaan soo kabsashadooda. Ugu dambeyntiina, app-ka Raadi aniga ayaa yeelan doona qayb cusub halkaasoo aan ku arki doonno walxaha la xiriira tan sumad. Markii aan joogno agagaarka u dhow, waxaan dhaqaajin karnaa dhawaaqa ama waxaan u adeegsan karnaa xaqiiqda sare si aan u helno.
Miyaad eegaysaa Glasses ama wax kale?
Sida ugu dhakhsaha badan inaad wacdo Apple Glasses, Rambo aad ayuu uga walaacsan yahay daahfuritaankiisa. Waa aalad gacan ka geysata taakuleynta khibradda dhabta ah ee dhabta ah ee stereo-ga ee taageerta nidaamka wejiga lagu dhejiyay. Qoraagu wuxuu u egyahay Google Daydream, in kasta oo ay u baahan tahay casriga si uu u shaqeeyo. Waxaan ku lug lahaan lahaa seddex aaladood dadaalkan xaqiiqada ah: laba ka mid ah Apple oo loo yaqaan Luck iyo Franc iyo dhinac saddexaad oo ka baxsan shirkadda la yiraahdo Holokit.
Barnaamijyadu waxay ciyaari doonaan door muhiim ah, halkaasoo loogu ciyaari doono si la mid ah CarPlay meesha iPhone wuxuu u dhaqmaa sidii aaladda ugu weyn Maxaa barnaamijyada awood. Waxay lahaan doonaan labo qaybood, mid waa marka la qabanayo (ay suuragal tahay iPhone) mid kalena marka ay “lebisanayaan” (isticmaalaha). Barnaamijyadan fidinta ah waxay u shaqeyn doonaan si la mid ah qaabkii ay ku sameeyeen barnaamijka. Apple Watch asalka ah.
IPhone-ka oo lagu dhawaaqi doono usbuuca soo socda wuxuu muujin doonaa horumarin lagu sameeyo tayada dhabta ah ee kor looqaaday iyadoo ay ugu mahadsan tahay qalabka dheereya ee ballaaran. Sidoo kale VWaxaan tusaale u nahay barnaamijyadan “stereo” sedexda goobood ee nidaamka: Khariidadaha, I raadiya aniga iyo QuickLook, kan dambe wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku aragto walxaha dhabta ah ee Safari ka socda.
In kasta oo aysan jirin wax hubaal ah oo ah in qalab laxiriira mashruucan lagu dhawaaqi doono usbuuca soo socda ama mustaqbalka, dabcan wuxuu ku dhawaaqayaa tallaabada dhexe gudaha u galida xaqiiqda dhabta ee Apple. Waxaan aragnay sida ARKit ay u dhaqaaqday muddo labo sano ah waxaana macluumaadkan uu muujin karaa tallaabo dhexe oo loo qaaday quraaradaha dhabta ah ee Apple.
La wadaag Soo hel astaamo dheeri ah oo ah muraayadaha Apple Glasses-ka iyo meesha loo yaqaan ‘beacon’